Turkiga oo qeyb ka qaadanaya la dagallanka Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Turkiga ayaa saldhig milatari ka hirgeliyay Soomaaliya sannadkii 2017-kii , kaas oo noqday xarunta tababbar ee ugu weyn adduunka ee uu Turkiga ka hirgeliyo meel ka baxsan gudaha dalkiisa. Waxaana tababbarro iyo taageero kale lagu siiyaa ciidamada dowladda Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo booqasho ku jooga Turkiga ayaa Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalkaasi kula kulmay dhigiisa, waxayna ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka Al-shabaab, loona sii xoojin lahaa iskaashiga iyo xiriirka wanaagsam ee ka dhaxeeya labada wasaaradood.
Wasiirka Gaashaandhigga dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale dhigiisa Turkiga ka dalbaday sidii loo kordhin lahaa taageerada iyo tababbarada dowlada Turkiga ay la garab taagan yihiin ciidamada xoogga Soomaaliyeed.isaga oo uga mahadceliyay taageerada iyo tababarada hagar la'aaneed ee dowlada Turkiga la garab taagan tahay dowlada Soomaaliya.
10-kii sanno ee ugu dambeysay Turkiga waxay galaangal muuqda ku lahayd Soomaaliya, waxayna dowladihii is xig-xigay la wadaageysay xiriir iskaashi, dhaqaale iyo mid dhinaca taageerada ah.